देश फर्के ज्यानलाई खतरा- विचार - कान्तिपुर समाचार
आफूले चिनेका कतिपय मृगौला रोगीहरूले लकडाउनका कारण डायलसिस गर्न नपाएपछि ज्यान गुमाएको देखेर मलाई झन् छटपटी भयो
असार २६, २०७७ सोनु सिनाल
देशमा खाएको हन्डरले नै उपचारका लागि मलाई हरेक हप्ता दुईपटक भारततिर धकेल्थ्यो । तर यसपालि एम्बुलेन्स र बिरामीको आउजाउ पनि ठप्पै पारिएछ । २०७६ चैत १२ गते । डायलसिसका लागि म एम्बुलेन्समा भारततिर लागें । एम्बुलेन्स चालकले शंका गरेझैं हामीलाई सीमापारि जान दिइएन । भारतीय सुरक्षाकर्मीले हाम्रो आग्रह सुनेनन् । सासूआमा र म घर फर्कियौं ।
डायलसिस नगरेको चार दिन भइसकेको थियो । चिन्ताको भारी बढ्दै थियो । निकै भनसुनपछि धनगढीको सेती अस्पतालमा डायलसिसको कुरा मिल्यो । महेन्द्रनगरबाट धनगढी जान एम्बुलेन्सबाहेक विकल्प थिएन । तर एम्बुलेन्स पाउनै सकस भयो । बल्लतल्ल चैत १३ गते फेरि एम्बुलेन्समा अस्पताल पुग्यौं । श्रीमान् पूर्वरेडियोकर्मी भएकाले धेरै ठाउँमा सहयोगका लागि फोन गरेर प्रदेश सरकारका प्रभावशाली नेताहरूसम्म कुरा पुर्‍याउन सकेपछि बल्ल काम बन्ने भयो ।
डायलसिस सुरु हुनअघि अस्पतालको प्रयोगशालामा मेरो रगत जाँच भयो । हेपाटाइटिस लगायत कुनै पनि भाइरल समस्या देखिएन । तर डायलसिस सुरु भएको दुई घण्टापछि डाक्टरहरूले मेरो हिस्ट्रीमा हेपाटाइटिस सी भएको बुझे । त्यसपछि उनीहरूले निजी प्रयोगशालामा हामीले नै पैसा तिर्ने गरी फेरि रगत जाँच गराए । बाहिर गरेको जाँचमा हेपाटाइटिस सी पोजेटिभ देखायो । एकपटक हेपाटाइटिस भएको मान्छेलाई उपचार गरिसके पनि भाइरल मार्क टेस्टमा पोजेटिभ नै देखिन्छ । उपचार गरिसकेको बिरामीको अवस्था पत्ता लगाउन एचसीभी आरएनए टेस्ट गर्नुपर्छ । यो जाँच धनगढीमा हुँदैन । तर मसँग भएका काठमाडौं र भारतमा पहिला गरेको सो जाँचका तीनवटा रिपोर्ट उनीहरूलाई देखाएँ । सोही रिपोर्टका आधारमा मलाई सामान्य बिरामीसरह सेवा दिन सकिन्छ भनेर भारत र भक्तपुर मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र अस्पतालकै डाक्टरले लेखेका पर्चा र पत्रसमेत देखाएँ । तैपनि डाक्टरले मलाई मुद्दा हाल्नेसम्मको धम्की दिँदै डायलसिस बन्द गर्न आदेश दिए । नेपालमा सेवा पाउन विभिन्न अस्पताल धाउँदै गर्दा मैले पनि बिरामीको अधिकारबारे बुझिसकेकी थिएँ । प्रतिवाद गरेपछि मात्र उनले चार घण्टाको प्रक्रिया पूरा गर्न दिए । सेती अस्पतालमा निःशुल्क डायलसिस पाउने सूचीमा आफ्नो नाम भए पनि मैले पैसै तिरेकी थिएँ । डायलसिस सकिएपछि पुनः सेवा नदिने भन्दै उनीहरूले पठाए ।
सेती अस्पतालको गेट हाम्रा लागि बन्द भएपछि नेपालगन्ज जाने निर्णय गर्‍यौं । त्यहाँ हेपाटाइटिसको बिरामीका लागि छुट्टै मेसिन थियो । हेपाटाइटिस सी को उपचार भैसकेपछि फेरि यस्तो छुट्टै मेसिनमा बस्नुपर्दैन । तैपनि लकडाउनले मेरा लागि जिउने बाटाहरू साँघुरो पारिसकेको थियो । नेपालगन्जको अस्पतालकै परिचित एक कर्मचारीसँग पक्का कुरा गरी हामी एम्बुलेन्समा कोहलपुर पुग्यौं र त्यसको भोलिपल्ट बिहानै सात बजे नेपालगन्ज पनि । तर अस्पतालले मेसिन बिग्रेको भन्दै डायलसिस नहुने भन्यो । ८ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर २२० किलोमिटर यात्रा गरी आएकी बिरामीलाई यस्तो जवाफ !
मैले काठमाडौंमा रहेका श्रीमान्लाई यसबारे फोनमा जानकारी गराएँ । उनले मलाई आश्वस्त पार्दै उपाय खोज्ने बताए । तर अस्पतालले कुनै पनि हालतमा सेवा दिन नसकिने भनिरह्यो । ६५ वर्षीया सासू र म दिनभरि अस्पतालको तलमाथि गरिरह्यौं । एकाएक साँझ परेपछि मात्र अस्पतालले एकपटकको ८ हजार तिर्न सक्ने भए डायलसिस गरिदिने भन्यो । चार दिनदेखि डायलसिस हुन नसकेको, त्यसमाथि दिनभरिको शारीरिक र मानसिक थकान, हामी तयार भयौं । रगत जाँच, बेड भर्नालगायत गरी थप २ हजार र डायलसिसको अग्रिम भुक्तानी लिएपछि पालो कुर्न भनियो । मलाई राति आठ बजे मात्र डायलसिस कोठामा लगियो । तर नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका नर्स र डाक्टरहरूले मेरो फिस्टुलाबाट रगत तान्नै सकेनन् । डायलसिसका लागि रगत बाहिर निकाल्न नसाहरू जोडेर शल्यक्रिया गरी तयार पारिएको फिस्टुला नै बिग्रिने चिन्ता थपियो । नर्सहरूको अज्ञानताले यसअघि दुईपटक फिस्टुलामा समस्या आइसकेको थियो ।
मैले भारतमा डायलसिस गर्ने अस्पतालको मान्छेसँग भिडियो कलमा कुरा गराएँ । धेरै कोसिस गर्दा पनि उनीहरूले रगतै तान्न सकेनन् । भारतकै प्राविधिकको सल्लाहअनुसार खुट्टाबाट अस्थायी पाइप राखे अनि राति एघार बजे डायलसिस सुरु भयो । बीचबीचमा फेरि पनि रोकिँदै दुई बजे राति मात्र डायलसिस सकियो । डायलसिस गर्नकै लागि कञ्चनपुरबाटै अर्का बिरामी पनि आएका थिए । उनलाई पनि सुरुमा डायलसिस हुन नसक्ने भनिएको थियो । तर हामीले कुरा गर्दैगर्दा उनको पनि प्रसंग चलेकाले अस्पतालले काम गरिदियो । हामीलाई अर्कोपल्ट आउन भने नेपालगन्ज अस्पतालले पनि ढोका बन्द गरेको जनायो । हामी भोलिपल्ट बिहानै महेन्द्रनगरतिर लाग्यौं, बल्लबल्ल भेटिएको एम्बुलेन्समा अरू बिरामीसँग भाडा आधाआधा गरेर ।
सामान्यतया घर पुग्दा मानिस खुसी हुन्छ । डर, चिन्ता र तनाव कम हुन्छ । ममा भने चिन्ता बढ्दै थियो । अबको चार दिनमा फेरि डायलसिसको बन्दोबस्त नभएमा मृत्यु नजिकिन सक्थ्यो । राज्य र तिनका व्यवस्थापकहरूलाई हाम्रा समस्या झिनामसिना लाग्दा हुन् । त्यसैले नै महामारीमा हामीजस्ता बिरामीहरूको कठिनाइबारे कम ख्याल भयो ।
हामीले हिम्मत भने हारेनौं । रोजीरोटी र उपचारको खर्च जुटाउन काठमाडौंमै अड्किएका श्रीमान्ले उतैबाट कोसिस गरिरहे । नियमित उपचारमा जाने भारतको खटिमा अस्पतालका लागि हामीले स्थानीय निकायसम्म कुरा पुर्‍याउन कोसिस गर्‍यौं । म बस्ने नगरपालिकाका मेयरले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा डायलसिसका बिरामीको समस्या समाधानको कुरा उठाउनुभयो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मबाट कुरा पुर्‍याएपछि सीडीओले भारततर्फ कुरा गर्ने आश्वासन दिए । श्रीमान्का एक साथीको सम्पर्कबाट भारतका डीएम (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) सँग कुरा भएपछि हामीले पास पायौं । कम्तीमा बोल्न सक्ने हामी मान्छेको हालत यो थियो, सामान्य मानिसको हालत के होला भन्ने कल्पनासम्म गर्ने अवस्था थिएन । लकडाउनको समयमा कतिपय आफैंले चिनेका मृगौला रोगीहरूले डायलसिस नै नपाएर ज्यान गुमाएको देखेपछि मलाई झनै छटपटी भएको थियो ।
२०७६ चैत २२ गते भारत छिर्ने योजनास्वरूप एम्बुलेन्ससँग कुरा गर्‍यौं । तर एम्बुलेन्स पारि जान पाउने कि नपाउने, पाए कहाँसम्म जान पाउने भन्ने केही टुंगो थिएन । पारि पनि कडा लकडाउन सुरु भइसकेको थियो । असजिलो नहोस् भनेर भारतको अस्पतालमा कुरा गरी आवश्यक परे त्यहाँको एम्बुलेन्सलाई पनि सीमासम्म आउन भन्यौं । सवाल जीवनमरणको थियो, अन्तिम साससम्म बाँच्ने आश त राख्नैपर्‍यो !
बिहान ८ बजेतिर सासू, मेरी बहिनी र म एम्बुलेन्समा गड्डाचौकी पुग्यौं । भारतको एसएसबीले फर्काइहाल्छ भनेर नेपाल प्रहरीले हामीलाई त्यहीँबाट फर्किन भन्यो । हामीले पास देखाउँदै उताको डीएमसँग कुरा भएको जानकारी दियौं । प्रहरी विश्वस्त नभए पनि हामीलाई रोकेन । नेपाल–भारत सीमाको ७ नम्बर पिलरनजिकै हामीलाई एसएसबीले हतियार देखाउँदै रोकिन आदेश दियो । हामीले फेरि पास देखाउँदै डीएमसँग कुरा भएको जानकारी दियौं । एसएसबीले भने त्यस्तो कुनै जानकारी आफूलाई नआएकाले फर्किन भने । हामीले यसबारे तुरुन्तै सीडीओ र मेयरलाई जानकरी दियौं । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरीका एक जनालाई एसएसबीसँग कुरा गर्न पठाए । तर एसएसबीले आफू केन्द्रीय सरकारमातहत भएकाले प्रदेश सरकारको डीएमको आदेश मान्न बाध्य नहुने बतायो ।
अब के गर्ने ? आश मार्ने त कुरै भएन । दस वर्षयता यस्ता समस्या पहिला पनि आएका थिए । यता हात जोड्दा र उता हात जोड्दा, सम्पर्क विस्तार गर्न र सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन धेरै समय खर्चिर्सकेका थियौं । कुनै पनि बेला कुनै पनि सम्पर्कले काम गर्न सक्थ्यो, जीवन बचाउन सघाउँथ्यो । यसअघि उपचारकै सिलसिलामा पटकपटक दिल्ली पुगेका बेला जेएनयुमा पढ्ने एक नेपालीसँग श्रीमान्को राम्रै सम्बन्ध बनेको थियो । राजनीतिक पहुँच राम्रै भएका उनैको सम्पर्कबाट त्यस दिन पनि नेपालस्थित भारतीय दूतावाससम्म कुरा पुर्‍याइयो । यससँगै श्रीमान्का अर्का साथीको सम्पर्कबाट उनका मामा पर्ने उत्तराखण्डका सांसदसम्म पनि कुरा पुग्यो ।
उताबाट समन्वयका लागि पहल गर्ने आश्वासन पाइयो । केन्द्रमा कुरा हुन लागेको भन्दै हामीले एसएसबीलाई आग्रह गरी नै राख्यौं । लगभग तीन घण्टाको थप प्रयासपछि एसएसबीलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग गर्न आदेश आएछ । एसएसबीले हामीलाई केही समय कुर्न भन्यो । दिउँसोको एक बजिसकेको थियो, हामी भोकै थियौं । तनाव र लगातार फोनमा कुरा गरिरहनुपरेकाले लखतरान भइसकेका थियौं । श्रीमान्ले गड्डाचौकीमै घर भएका एक साथीलाई खानेकुराका लागि आग्रह गरेछन् । एम्बुलेन्स चालकलाई पनि फर्किन हतार भइसकेको थियो ।
दुई बजेतिर एसएसबीले आफ्नो डाक्टरलाई बोलायो र हामी तीनै जनाको कोरोना परीक्षण भयो । अनि हामीले भारत छिर्न पायौं । श्रीमान्का साथीले खाना ल्याएर आएको भन्दै ७ नम्बर पिलरनजिकबाट फोन गरे । तर हामी त्योभन्दा एक किलोमिटर पश्चिम एसएसबीको क्याम्पपारि पुगिसकेका थियौं । मुखैमा आएको गाँस पनि छाड्नुपर्‍यो ।
नेपाल–भारतको त्यो पश्चिमी सीमा मैले धेरैपटक पार गरेकी छु । तर त्यस दिन मलाई ठूलै युद्ध जितेझैं महसुस भयो । वनबासा पुल पार गर्दै गर्दा आत्मविश्वास निकै बढेको थियो, पेट खाली नै भए पनि । लाग्यो— मैले मृत्युमाथिको युद्ध फेरि एकपटक जितें ।
हामी पन्ध्र मिनेटमा खटिमा पुग्यौं । अस्पतालमा पहिल्यै कुरा भइसकेकाले पुग्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले डायलसिस सुरु गर्‍यौं । खाना पनि डायलसिस गर्दागर्दै खायौं । डायलसिस सकिएपछि म अस्पतालको एउटा वार्डमा सिफ्ट भएँ ।
तर समस्या सकिएको छैन । किनभने लकडाउनका बेला हामी नेपालबाट भारत पुगेका हौं । त्यसैले लुकेर बस्नुपरेको छ । क्यान्टिनबाट खाना ल्याउँदासमेत लुकेर हिँड्नुपर्छ । नयाँ मान्छे देखेर कसैले प्रहरीलाई खबर गरेमा क्वारेन्टिन पठाइदिने डर छ । आफ्नै देशमा उपचार हुँदो हो त मजस्ता बिरामीले पाइलापाइलामा यस्तो भुक्तमान बेहोर्नुपर्ने थिएन । आफैं मृगौलापीडित प्रधानमन्त्रीले मृगौला उपचारका लागि नेपालमै राम्रो वातावरण बनाइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला !
अहिले खटिमामै अस्पतालको बसाइ छ । खाना, खाजा अनि उपचार । खर्च दुई गुणा बढेको छ । यसले देशको सुदूर कुनामा बाँचिरहेको यो दलित परिवारमा अर्को वज्रपात ल्याउँदै छ । बाँच्ने लालसाले सहयोगको हात फैलाउनु र जीवनको याचना गर्नु त बानी नै परिसक्यो । देशमा उपचार सेवा सहज छैन । सबै मानिसझैं विपत्का बेला देश फर्कने र जहान परिवारसँगै बस्ने चाहना त मेरो पनि छ, तर के गर्नु, देश फर्के मेरो ज्यानलाई खतरा छ !
प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:१२